Xafladii furitaanka shirkadda Mersen Zhejiang Co., Ltd. waxaa la qabtay galabtii 5-ta Nofeembar
Xafladii furitaanka shirkadda Mersen Zhejiang Co., Ltd. waxaa la qabtay galabtii 5-ta Nofeembar. Kuxigeenka xoghayaha ahna madaxa deegaanka ee degmada Changxing Yiting Shi ayaa khudbad jeedisay. Hadalkeeda, Yiting Shi waxay ku sheegtay in horumarka Changxing had iyo jeer uu jecel yahay libaax qoob-ka-ciyaaraya, oo leh ...
Yuliao barta muuqaalku waxay ku taal Yuliao, Magaalada Mazhan, oo ku taal koonfur-bari ee Gobolka Cangnan, Gobolka Zhejiang. Barigeedu wuxuu kudhowyahay badda, koofurta waxay kudhowdahay magaalada Xiaguan, sidoo kale woqooyiga waxay kuxirantahay magaalada Chixi, dhanka kale galbeedka waxay kusii jeedaa magaalada Mazhan. Waxay daboolaysaa 18.5 ki ...
Mersen wuxuu ku guuleystey cinwaanka sharafeed ee CSR (masuuliyada bulshada ee shirkadaha) sanadka 2020
Mersen waxay mas'uul ka ahayd macaamiisha, jaaliyadaha iyo bay'ada iyada oo abuuraysa macaash isla markaana u qaadanaysa mas'uuliyado sharciyeed saamileyda iyo shaqaalaha. Waxaan aaminsanahay in mas'uuliyadda bulshada ee shirkadaha ay u baahan tahay shirkadaha inay ka gudbaan fikradda soo jireenka ah ee qaadashada aqoonta ...
Si loo xoojiyo dhammaan wacyiga shaqaalaha ee badbaadada dabka, loona hagaajiyo xirfadahooda wax ku oolka ah ee ka hortagga dabka iyo ka hortagga aafooyinka, sidoo kale looga hortago shilalka ku dhaca burooyinka, waxaan si guul leh ku qabanay tababar dabka subixii Oktoobar 9, 2020, taas oo ah mid bil ka hor amniga dabka qaranka ...